ညီလင်းသစ်: ကျနော်နှင့် ထိုနေ့လယ်ခင်းများ
၁၉၉၂ မှာ ကျနော် ၁၀ တန်းအောင်တော့ အစပိုင်းကာလတွေမှာ ဘာလုပ်လို့ လုပ်ရမှန်း မသိဘဲ ယောင်ချာချာနဲ့...၊ အဲဒီကာလတွေမှာ တက္ကသိုလ်တက်မယ့် ကျောင်းသားတွေက တောင်လိုပုံလို့၊ စုံစမ်းကြည့်တော့ ကျနော်လည်း နောက် ၂ နှစ်လောက်ကြာမှ တက်ရမယ်လို့ သိရတယ်၊ ဒါနဲ့ ဟို သင်တန်းတက်ရနိုးနိုး ဒီသင်တန်းတက်ရနိုးနိုး ဟိုအလုပ်ဝင်လုပ်ရနိုးနိုး ဒီအလုပ်ဝင်လုပ်ရနိုးနိုးနဲ့ ဖြစ်နေတုန်း ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေ စုပြီးဖွင့်တဲ့ ဗီဒီယိုအခွေအငှားဆိုင်လေးမှာ ထိုင်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့ တော့တယ်၊
ဆိုင်ကိုအတူရှယ်ယာထည့် ဖွင့်တဲ့သူငယ်ချင်းအားလုံး နီးပါးက နေ့လည်ဆို အလုပ်လုပ်တဲ့ကောင်နဲ့ သင်တန်းတက်တဲ့ကောင်နဲ့ ဘယ်သူမှ မအားကြဘူး၊ လောလောဆယ် အားနေတာက ကျနော်ဆို တော့ နေ့ပိုင်းဆိုင်ထိုင်ဖို့ ကျနော်ပဲ တာဝန်ယူလိုက်တယ်၊ အဲဒီကာလတွေတုန်းက ကျနော်ကဆံပင် ကိုအရှည်ထားပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို တေးရေးဆရာတဝက်၊ ကဗျာဆရာတဝက် ရောထားတဲ့ကောင် လို့ စိတ်ကြီးဝင်နေချိန်ပေါ့...၊ ဆံပင်ရှည်ကလည်း ကျောင်းတုန်းကတည်းက ထားချင်နေတာ၊ ဒါပေ မယ့် အိမ်ကရော ကျောင်းကပါ တားမြစ်ထားတာနဲ့ မြိုသိပ် စောင့်စားနေ ခဲ့ရတာ၊ ဆယ်တန်း အောင်စာရင်းလည်းထွက်ရော ဘာပြောကောင်းမလဲ၊ အဲဒီနေ့က ဆံပင်ဒီမိုကရေစီ ရတဲ့နေ့ ဖြစ် သွားရော... ...၊
ဗီဒီယိုအခွေဆိုင်က နေ့ခင်းပိုင်းဆိုရင် ဘယ်သူမှ လာမငှားဘူး၊ ဒီတော့ အထက်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ကဗျာ ဆရာနဲ့တေးရေးဆရာကို 50း50 ရောထားတဲ့ ဆံရှည်ကိုယ်တော်ကအကြိုက်ပေါ့၊ ဂစ်တာတစ်လက် ရယ်၊ ဘောပင်တစ်ချောင်းရယ်၊ စာရွက်တစ်ထပ်ရယ်နဲ့ သူ့နေ့လယ်ခင်းတွေကို ပူပူလောင်လောင်ပဲ မျိုချလေ့ ရှိတယ်၊ တခါတလေ သီချင်းလေး တပိုင်းတစ၊ တခါတလေ ကဗျာလေး တပိုဒ်နှစ်ပိုဒ်နဲ့ အဲဒီလို ကျနော်တစ်ယောက်တည်း မွေ့လျော်တဲ့ နေ့လယ်ခင်းတွေကို မျက်စိကျတဲ့ သူတစ်ယောက် ပေါ်လာတယ်၊ ဇော်မင်း…..၊
ဇော်မင်းက အရမ်းရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေထဲက တစ်ယောက်၊ သူက ဆယ်တန်းကို ကျနော်နဲ့ အတူတူအောင်ပြီး တခါတည်း အဝေးသင် တန်းတက်လိုက်တယ်၊ ပြီးတော့ တဖက်ကလည်း ဟို တယ်ကြီး တစ်ခုမှာ အလုပ်ဝင်လုပ်တယ်၊ ပြောရရင် ဇော်မင်းက တော်တော်ဖြောင့်တယ်၊ အသား ဖြူဖြူ နှာတံပေါ်ပေါ် မျက်လုံးတောက်တောက်နဲ့...၊ ကောင်မလေးတွေ သဘောကျနိုင်တဲ့ ရုပ်ရည် ပိုင်ရှင်ဆိုပါတော့၊ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့မှာတော့ အဲဒါနဲ့ ပြောင်းပြန် ဇော်မင်းက ချစ်သူတစ်ယောက် မှ မရှိရှာဘူး၊ သူ့ဖက်က တဖက်သတ် လိုက်ကြိုက်တဲ့ ကောင်မလေးတွေ တော်တော်များများတော့ ရှိပါတယ်၊ ခက်တာက သူက ချိန်လိုက်တာနဲ့ တဖက်က တခြားတစ်ယောက်နောက်ကို ပါသွားတာ များတယ်၊
သူငယ်ချင်းတွေက သူ့ကို ‘ မင်းက ရူပါပဲ ရှိတာ၊ ဗျူဟာမှ မရှိဘဲကွ ’ လို့စ,လေ့ ရှိပါတယ်၊ အဲဒီအခါ ဇော်မင်းက ‘ ငါကိုယ်နှိုက်က အချစ်ကံခေလွန်းတဲ့ အသည်းကွဲ သမားကြီးပါကွာ ’ လို့ ပြန်ချေပလေ့ ရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့် ပျော်ပျော်ပါပဲ၊ တကယ်ကတော့ သူကဒီလောက်ကြီးလည်း အလေးအနက် မဟုတ် ပါဘူး၊ လူငယ် ဘာသာဘာဝ ပါးပါးလေး ဖြတ်သန်းရုံ သက်သက်ပါ၊ တခါမှာတော့ ဇော်မင်း ကို ကျနော် ကဗျာတိုလေးတစ်ပုဒ် ရေးပေးဖူးတယ်၊ ကောင်မလေး တစ်ယောက်ကို ပေးချင်တယ် ဆိုလို့၊ တကယ်တမ်း နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ ကောင်မလေးနဲ့လည်းတွေ့ရော သူကြောက်ပြီး မပေးရဲ တော့ဘူး၊ ကျနော်တို့က ဒီအကြောင်းကိုကြားပြီး ရယ်တော့ သူက ‘ ငါ ပေးမှာပါကွ မင်းတို့က လည်း၊ ငါက အချိန်ယူနေ တာ၊ ထိုးမယ့်ဆင် နောက်တစ်လှမ်း ဆုတ်တဲ့သဘော ပေါ့ကွာ ’ လို့ပြော တယ်၊ ဒါပေမယ့် ကျနော့် စိတ်ထင် သူ့ဆင်က ချောက်ကမ်းပါးစွန်းမှာ နောက်လှည့် ရပ်နေခဲ့ပုံရ တယ်၊ အဲဒီတစ်လှမ်း ဆုတ်ပြီး ကတည်းက လုံးဝမမြင်ရတော့ဘူး၊
အဲဒီ ဇော်မင်းက နေ့လယ်နေ့ခင်းတွေမှာ ကျနော်သီချင်းတွေ၊ ကဗျာတွေ လက်တည့်စမ်းနေတာကို အကွက်ကောင်း တွေ့သွားတယ်၊ သူက ကျနော့်ကဗျာတွေကို သူကြိုက်ကြောင်း၊ သီချင်းတွေဟာ လည်းသံစဉ်ဟာ နားမှာချက်ချင်း စွဲသွားစေကြောင်း စသဖြင့်ကျနော့်ကို မြှောက်ပေးတယ်၊ ပြီးတော့ မှ သူတွေ့လာတဲ့ ကောင်မလေးတွေကို ပေးဖို့ ဟိုဟာရေးခိုင်း၊ ဒီဟာရေးခိုင်း လုပ်တယ်၊ ကျနော်က လည်း သူပြောတာတွေ မဟုတ်မှန်းသိသိကြီးနဲ့ သဘောတွေကျလို့...၊ သူတောင်းဆိုလာရင် လက် တည့်စမ်းဖို့ အသင့်၊ ကျနော့်မှာ နေ့လယ်ခင်းတွေ လုံလုံလောက်လောက် ရှိတယ်လေ၊ တခါကျ တော့ သူ့အလုပ်က ကောင်မလေးအကြောင်း ကျနော့်ကို ပြောပြပြီး သီချင်းတစ်ပုဒ် ရေးခိုင်းပြန် တယ်၊ အဲဒီကောင်မလေးကို သူဆိုပြချင်လို့ ပါပေါ့လေ၊ အလုပ်မှာ ဂစ်တာမရှိဘာမရှိနဲ့ သူဘယ်လို ဆိုမလဲ တော့မသိဘူး၊ ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒီတခေါက်မှာ ကျနော်ကလည်း မုဒ်မဝင်တော့ တော်တော်နဲ့ သီချင်းမပြီးနိုင်ဘူး၊ နောက်ဆုံး မနည်းကို ကြိုးစားပြီး ရေးလိုက်ရတယ်၊ ဒါပေမယ့် ထုံးစံအတိုင်း ကျနော်တို့ရဲ့ ဇော်မင်းက အဖျားရှူးသွား တာပါပဲ၊
တစ်ရက်မှာတော့ သူက ဆိုပြန်တယ်၊ သူတို့ ရုံးနားမှာ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို သူတွေ့ပြန်ပြီ တဲ့၊ ကောင်မလေးက ပါဂျဲရိုး အမြဲစီးတယ်တဲ့၊ အဲဒီခေတ်တုန်းက အခုလို ပရာဒိုတို့၊ လင်န်းခရုဆာ တို့ သိပ်မရှိသေးဘူး၊ ပါဂျဲရိုးတွေ ခေတ်စားနေချိန်ပေါ့၊ အဲဒီ ပါဂျဲရိုးပေါ်က ကောင်မလေးကိုသူတော် တော်ကြွေနေပြီ ဆိုတဲ့အကြောင်း၊ ဒီတခါတော့ တကယ်အတည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သူ့မှာ သတ္တိတွေရှိနေ ပြီဖြစ်လို့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်တော့ ပေးချင်ကြောင်း စသဖြင့် ဖွဲ့ကာနွဲ့ကာနဲ့ ပြောပြီး ဇော်မင်းက ကျ နော့်ကို ကဗျာတောင်းပြန်ရော၊ အရင့်အရင် အခေါက်တွေတုန်းကလည်း ဒီလိုပဲပြောပြီး နောက်ဆုံး မှာဘာမှ ဖြစ်မလာတာ ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်းအားလုံး အသိပါ၊ ဒါပေမယ့် ဇော်မင်းကိုကျနော်လုံးဝ စိတ်မဆိုးပါဘူး၊ သူမပေးတာက သူ့အပိုင်း၊ သူ့နှလုံးသား ကိစ္စ၊ ကျနော် မထိခိုက်ပါဘူး၊ ကျနော့်အ တွက်က ကဗျာတွေသီချင်းတွေ အဖတ်တင်လို့ ပိုတောင်ကောင်းသေးတယ်၊
ဒါနဲ့ ကဗျာရေးပေးမယ်လို့ သူ့ကိုကျနော် ကတိပေးလိုက်တယ်၊ ဒီတခါတော့ ကျနော် ဇော်မင်းကို နောက်ချင်နေမိတယ်၊ သူ့ကို ကတိပေးထားတဲ့ အတိုင်းလည်း ကဗျာပေးရအောင်၊ ဒီအဖြစ်အပျက် လေးကိုလည်း အမှတ်တရဖြစ်သွားအောင်၊ သူ့ကိုလည်း နောက်ရအောင် ရည်ရွယ်ပြီးကျနော်ကဗျာ တစ်ပုဒ် ချရေးလိုက်တယ်၊ ဒီကဗျာကိုလည်း ထင်တဲ့အတိုင်း သူမပေးဖြစ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ကျနော် တို့ကြားမှာတော့ အမှတ်တရလေး တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်၊ အဲဒီတုန်းကနေ့လယ်ခင်းတွေကို အခုပြန် တွေးတော့ လွမ်းမိပြန်တယ်၊ တကယ်ပါပဲ…၊ ပူစပ်ပူလောင် နေ့လယ်ခင်းတွေကို တဝတပြဲ မျိုမျိုချ ပြီး လတ်ဆတ်စိမ်းစိုတဲ့ ပေါ့ပါးပျော်ရွှင်မှုတွေ ပြန်ပြန်အန်ထုတ်ခွင့် ရခဲ့တဲ့ကာလတွေပါပဲ ။ ။
“ နိုး နိုး နိုး ” တဲ့
‘ ၄၅ ’ အလယ်ခုံမှာ
၃၀ စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၀၈
Posted by ညီလင်းသစ် au 30.9.08
ကဗျာက မိုက်တယ် :)
October 2, 2008 at 3:11 AM
Hope to see more posts about those afternoons.
I'm sure you have so many memories from that business - at least about all kinds of customers. :D
I've always thought it's cool to have movie rental shop. Various kinds of movies for FREE. LOL
ထင်သာမြင်သာရှိပါ့ဗျာ .... လွမ်းလောက်တယ် ကဗျာက :D
92 မှာ ကျွန်တော် ၂ တန်းအောင် တုန်းကလည်း ဘာလုပ်ရမှန်း မတိဘူးဗျ.. မေမေက ဗုဒ္ဓဘာသာ သင်တန်းသွားတက်ခိုင်းလို့ ယောင်ချာချာ သွားတက်လိုက်သေးတယ်. .:P
Shwe Eain Si said...
အပေါ်က စာတမ်းတိုလေးကို စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ဖတ်မိတယ် (အကို့ ဘ၀တစ်စိတ်တဒေသပါနေလို့)
အောက်က ကဗျာလေး ဖတ်မိပြီးတော့ ရယ်မိတယ် (သဘောကျလို့)
ဟုတ်တယ် ညီမရဲ့..၊ ဒါတွေက တကယ့် true story လေ..။း)
ပါဂျဲရိုးကဗျာ ... နဘေထပ်ကလေးနဲ့ ရေးထားတာ မိုက်တယ်။ :)
Plead.....(Bangkok Love Stories) - ကျွန်မဖုန်းထဲကို Netflix App ထည့်ပြီး ရုပ်ရှင်တွေကို ၀ယ်ကြည့်နေတာ သုံးလလောက်ရှိပြီ...။ သူက တစ်ကားပြီးထက် Series တွဲတွေပဲတင်ပေးတာများတယ်...။ ကျွန်မ ကိုးရ...
တရားထိုင် တရားမှတ် လုပ်သင့်ပါတယ် - ကျွန်မ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦးအဖြစ် ရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီး ပုတီးစိတ်တလှည့် တရားထိုင်တလှည့် အချိန်ရရင်ရသလို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမယ့် တစိုက်မတ်မတ် တရားထိုင်ဖြစ်တာကတော့...
မောင်မောင်ရေ... - ဇွန် ၃ ရက် တနင်္လာနေ့ည ၁၁ ခွဲ အီကွေဒေါ ၆ ရက် ခရီးအတွက် အထုပ်အပိုးပြင်နေတုန်း မကြီးဆီက ဖုန်းဝင်လာတယ်။ မောင်မောင် ကားတိုက်လို့ပဲခူးဆေးရုံရောက်နေတယ် ...